Zarganar in SF – တွေ့ဆုံပွဲစည်ကားသိုက်မြိုက် | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုဇာဂနာနဲ့ ဆန်ဖရန်မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲစည်ကားသိုက်မြိုက်
ဓာတ်ပုံသတင်း၊(Media Credit – ကိုဒေါ်နယ်၊ ကိုမိုက်မင်းမင်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂
ယမန်နေ့က ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ ချာဘိုးကောလိပ်ခန်းမမှာ ဇာဂနာနဲ့ မြန်မာမိသားစုများ မိတ်ဆုံပွဲတော်ကို ကျင်းပရာ ဘေးဧရိယာရောက် မြန်မာမိသားစုဧည့်ပရိသတ် ၁၀၀၀ နီးပါး တက်ရောက် အားပေးကြပါတယ်။
စွယ်စုံရ လူရွှင်တော်၊ အနုပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုဇာဂနာ မြန်မာမိသားစုများနဲ့ မိတ်ဆက်ဟောပြောမှုများအပြင် ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက် ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်က ဇာတ်ကားများ၊ ဆုရဒါရိုက်တာများရဲ့ ကားသစ်များနဲ့ ၈၈ မျုိးဆက်တို့ရဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတို့ကို တင်ဆက်ပြသခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့ မိသားစုများ စောင့်ရှောက်ကူညီရေး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကိုဇာဂနာကို ပြည်ပရောက် မြန်မာများက သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုထောက်ခံ အားပေးမှုများ ပြုလုပ်ကြတဲ့ ပွဲတော်တခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမိုက်မင်းမင်းရဲ့ Eagel Vidoe Production က မေတ္တာနဲ့ ရိုက်ကူးပြီး ယူကျုကနေ တင်ဆက်ပြသပေးမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံများကိုတော့ ကိုဒေါ်နယ်ရှူးက ရိုက်ကူးမျှဝေပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
9 Responses to Zarganar in SF – တွေ့ဆုံပွဲစည်ကားသိုက်မြိုက်
Ko Ye Ng on February 21, 2012 at 9:58 am
Thanks for show, but we like to mention the flag you bow is not the real union flag. You guys want to the Burma unitary. So we oppose you guy doing when we approach the actual union in the near future. Do not forget Pinlong agreement. Nations from Burma, associated together by the agreement, are not only Burma.
yannaung on February 21, 2012 at 11:23 am
စီစဉ်သူများခင်ဗျား။ကမ္ဘာမကြေသီချင်းတောင်မှမရတဲ့သူတွေကို ဒေါ်မာမာအေးနဲ့ တွဲပြီးစီစဉ်တာကတော့ အရမ်းကိုသိက္ခာကျစေပါတယ်။ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
Maungmaung Thaw on February 21, 2012 at 11:28 pm
You are right, I feel the same too, I invite everybody can come and sing, that was my fault, I should let Aunty Aye go alone. So I hope everyone would forgive us. We did this event in less than3week, I did not expect out come of this event will be that successful, but fur beyond I excepted. Thank you
Jason Hu on February 22, 2012 at 1:44 am
Thank you very much for your comment as feedback and comment are always valued for us in the future events. I do apologize for this matter you are concerned. As one of our event organizers mentioned in previous reply, we planned this event in suchashort and did not have enough time to practice any performance you saw on the stage. We will try better and more organized if we have more event in the future. Again, thank you very much for your support and comment.
myayee on February 23, 2012 at 12:08 pm
ကမ္ဘာမကြေသီချင်းမရတာကိုအပြစ်မမြင်ပဲ ပွဲဖြစ်မြောက်ဖို. သူတို.ရဲ.စေတနာနဲ.အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းပြီး
ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပန်းခဲ.ကြရတာပါ။ကိုကိုယ်တိုင် မကူညီနိုင်ရင်တောင် ကူညီလုပ်အားပေးတဲ. သူတွေကို အပြစ်မပြောသင်.ပါဘူး ကိုရန်နောင်။
Aung Myint on February 21, 2012 at 8:00 pm
Over all this was the best Myanmar event in San Francisco Bay Area, wasn’t this? Some pieces are not important and the people who supported Ko Zargar event should be thanked.
Jason Hu on February 22, 2012 at 1:45 am
Thank you, Ko Aung Myint.
Maungmaung Thaw on February 23, 2012 at 11:17 pm
Ko Yannaung I can tell you, if you watch the whole program you will see more of our mistake. So I apologize in advance. Thank you
Ko Ko Lay on February 24, 2012 at 12:24 am
ဝေဖန်မှုအားလုံးကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုပါတယ်၊ ဝေဖန်မှုရှိမှ ပြုပြင်နိုင်မယ်၊ ပြုပြင်နိုင်မှ တိုးတက်မယ်၊ တိုးတက်မှ ပိုကောင်းမယ်၊ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ နောက်နောင် ပွဲတွေမှာပိုကောင်းအောင်ကြိုးစား ကြတာပေါ့။ ဒါဟာဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် တရပ်ပါဘဲ၊
All criticisms are very welcome. Criticism is require of changes and improvement, and improvement can bring about better world. Isn’t it. Let’s try our best for future events. This is all about basic principle of democracy.